साइलेन्ट हर्ट अट्याकले पनि दिन्छ यी ५ संकेत, जानी राखौँ – Etajakhabar
साइलेन्ट हर्ट अट्याकले पनि दिन्छ यी ५ संकेत, जानी राखौँ
ताजा खबर :- हर्ट अट्याकको विषयमा लगभग ४५% अवस्था साइलेन्ट हर्ट अट्याक हुन्छ । चिकित्सकका अनुसार, कयौँ पटक हार्ट डिजिज नहुँदा पनि साइलेन्ट हर्ट अट्याक हुनसक्छ । महिलाहरूको तुलनामा पुरुषहरूमा साइलेन्ट हर्ट अट्याकको समस्या बढी देखिएको छ ।
के हो साइलेन्ट हार्ट अट्याक?
साइलेन्ट हर्ट अट्याकलाई साइलेन्ट मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन silent myocardial infarction (SMI) भनिन्छ । यसमा कुनै व्यक्तिलाई हर्ट अट्याक हुँदा छातीमा दुखाई महसूस हुँदैन र हर्ट अट्याकको पत्ता लाग्दैन । हुनत: यसको केही अन्य लक्षणहरू महसूस हुन्छन् ।
किन थाहा हुँदैन साइलेन्ट हर्ट अट्याकको दुखाई?
धेरै पटक मस्तिष्क सम्म दुखाईको महसूस पुर्याउने नसा वा स्पाइनल कार्डमा समस्याको कारण वा साइकोलोजीकल कारणले रोगीहरूले दुखाई पहिचान गर्न सक्दैनन् । यसको साथै बढी उमेर भएका वा डायबिटीजको रोगीमा ओटोनोमिक न्यूरोपैथीको कारण पनि दुखाई महसूस हुँदैन ।
साइलेन्ट हार्ट अट्याकको ५ संकेत
१- ग्यास्ट्रिक समस्या, पेट खराब हुनु,
२- थोरै काम गर्दा पनि थकान महसूस हुनु,
३- पटक-पटक पेट फुल्लिनु,
४- अचानक चिसो पसिना आउनु,
५-पटक-पटक श्वासप्रश्वासमा कठिन हुनु,
साइलेन्ट हर्ट अट्याकको ५ कारण
१- बढी ओयाली, बोसोयुक्त र प्रोसेस्ड फूड,
२- शरीरिक क्रियाकलाप नगर्दा,
३- जाँडरक्सी र चुरोटको सेवन,
४- डायबिटीज र मोटोपना,
५- तनाव र चिन्ता,
साइलेन्ट हर्ट अट्याकबाट बँच्ने ५ उपाय
१- आहारमा सलाद र सागपात बढी समावेश गर्नुहोस् ।
२-नियमित हिड्ने, व्यायाम र योगासन गर्नुहोस् ।
३-चुरोट, जाँडरक्सीको सेवन गर्नुहुँदैन ।
४-चिन्ता र तनावमुक्त रहनुहोस् ।
५-नियमित रूपमा मेडिकल जाँच गराउनुहोस् ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आश्विन १९, २०७४ समय: १५:१५:४०